Golaha Ammaanka oo soo jeediyay wax ka qabashada qaraxyada Al-Shabaab! | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Golaha Ammaanka oo soo jeediyay wax ka qabashada qaraxyada Al-Shabaab!
Golaha Ammaanka oo soo jeediyay wax ka qabashada qaraxyada Al-Shabaab!
Fadhigii ugu dambeeyay Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay waxa ay uga hadleen xaaladda Soomaaliya iyo kahortagga waxlaha laga sameeyo ama loo adeegsado qaraxyada ee loo iib geeyo Soomaaliya.
Golaha ammaanka ayaa u codeeyay khamiistii in laga hortago iibinta walxahaas lagu farsameeyo qaraxyada oo halis ku ah dadka, isla markaana Khatar weyn gelin karta nolosha dad badan oo haatan caafimaad qaba.
Si gaar ah warbixinta kasoo baxday kulanka Golaha ammaanka waxaa loo dul istaagay Al-Shabaab oo inta badan geysata weeraro qaraxyo u badan & dilalka oo ay u adeegsato hub kala duwan.
Dowladda Federaalka waxaa loogu baaqay in ay sii laba-laabto la dagaalanka Al-Shabaab oo ku sumadeysan liiska waxa loogu yeero Argagixisada, lacagaha sharci darrada ah ee soo galay Shabaab sanadkii hore 2019-kii oo Khubarada Qaramada Midoobay ay ku qiyaaseen $21 Milyan.
Warbixinta Golaha ammaanka oo dheereed waxaa inteeda badan diiradda lagu saaray xaaladda amni ee Soomaaliya, dhaqaalaha Al-Shabaab soo gala, Walxaha qaraxyada loo adeegsado & qorshaha wax looga qaban karo.
Qaraarka lagu ansixiyay 13-0 waxaa u codeeyay Ruushka & Shiinaha, markale waxaa sidaas lagu xaqiijiyay cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, Golaha ayaa bogaadiyay tallaabooyinka & dadaalada lagu dhisayo Ciidamada Qaranka Soomaaliya.
Golaha Shacabka BFS oo dhawaan fadhi ka yeeshay kiimikooyinka loo adeegsado Beeraha, Xildhibaanno ka hadlay kulanka ayaa soo jeediyay in dalka laga mamnuuco kiimikooyinka qaar oo looga maarmi karo Beeraha, sabab la xiriirta in Qaraxyada la sameeyo.